Train Tsidika dia goavana any Eoropa, ary efa nahazo ny fihetseham-po dia tsy manova na oviana na oviana tsy ho ela. Misy antony vitsivitsy fiarandalamby dia toy ny malaza eo Eoropeanina, ary izy rehetra dia 100% legit: izy ireo faran'izay haingana, vidim-mahomby, ary mety azo atao amin'ny lafiny rehetra. Plus, Fiaran-dalamby any Eropa no mitaingina ny marina Travel traikefa, izay tombony ho iray hafa fotsiny ny zavatra rehetra!
miandrasa, inona? Eny, marina izany! Noho zavatra iray antsoina hoe "Lamasinina alina in Eoropa"Mpandeha izay mandany ny 10 ora amin'ny lamasinina avy amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B dia afaka mankafy ny tombony amin'ny mitaingina lamasinina mandritra ny alina any Eropa ary fahavaratra vola amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Misy isan-karazany ny maro nanolo-trano ao "levitra fiarandalamby," natao mba hifanaraka ny rehetra mandeha safidinao ary ny teti-bola. Noho izany, dia efa nahazo:
tsia, tsy manonofy ianao - amin'ny ankapobeny, rail hadilanana avy amin'ny tombontsoa izay mety ho fanomezam-pahasoavana na inona na inona avy amin'ny tsy ampy taona toy ny mitaingina sambo sy ny fitaterana bus amin'ny fihenam-bidy amin'ny hotely sy fitsangatsanganana an-tongotra. Indraindray, afaka hahazo valisoa na dia tanteraka ny fanatitra hohanina asa maimaim-poana ao anatin'izany ny maimaim-poana river Cruises, sakafo, ary toy izany koa.
Amin'ny manaraka ianao manana eritreritra faharoa momba na tsia nandeha lamasinina - mieritreritra ny valiny dia somary tsy mazava ... izany? Mandeha Vonjeo-A-Train au livre ny toerana ao amin'ny 3 minitra, amin'ny tahan'ny mora indrindra, ary nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-surprising-facts-you-should-know-about-trains-in-europe-fun-times%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)